Madaxweynaha Mareykanka oo meel mariyay xaaladaha aan caadiga aheyn ee Soomaaliya – Somali Top News
Madaxweynaha Mareykanka oo meel mariyay xaaladaha aan caadiga aheyn ee Soomaaliya
Madaxweynaha dalka Maraykanka, Donald Trump waxa uu qalinka ku duugay Ogeysiin uu xilliga ugu kordhiyey xaalladda Degdegga ee Khataraha Amniga iyo Siyaasadda Maraykanka ka soo wajihi karta xaalladaha aan caadiga ahayn ee dalka Somalia.
Hadal-qoraal oo ka soo baxay Aqalka Cad ee looga arrimiyo dalkaasi ayaa lagu sheegaa inuu Madaxweyne Trump muddo hal sanno ah ku kordhiyey Xaalladda Degdegga ee Qaranka.
Ogeysiinta Madaxweyne Trump ka soo saaray Arrintaasi ayaa waxa uu nuxurkeeda ahaa sidatan:
Bishii April 12-dii ee sannadkii 2010-kii ayaa waxa uu Madaxweynihii Maraykanka soo saaray Amar Fulin tirsigiisu ahaa 13536, oo uu ku caddeeyey Xaalladda Degdegga ee Qaranka.
Qoraalkaasi waxaa lagu soo bandhigay sida loola macaamiltami doono cabsida Amniga Qaranka iyo Siyaasadda Dibedda ee Maraykanka oo ku aadan Cabsida aan caadiga ahayn ee Xaalladda Ammaanka iyo sidii loo xalin lahaa colaadaha ka socda gudaha Somalia, Falalka Burcad-baddeeda iyo dhaaca hubeysanee meelaha ka baxsan Xeebaha Somalia.
Bishii July 20-dii ee sannadkii 2012-kii, Madaxweynaha Maraykanka waxa uu soo saaray Amar Fulin oo tirsigiisa ahaa 13620 si loo qaado tallaabooyinka dheeraadka ee lagu wajahi lahaa Xaalladad Degdegga ee Qaranka ee lagu soo saaray Amarka Fulinta ee tirsigiisu ahaa 13536 iyo Go’aankii Golaha Ammaanka ee tirsigiisu ahaa 2036 ee bishii Feberaayo 22-dii ee sannadkii 2012-kii iyo Qaraarkii tirsigiisu ahaa ahaa 2002 ee ka soo baxay Golaha Ammaanka ee QM bishii Kuly 29-dii ee sannadkii 2011-kii.
Go’aanadaasi oo ku aadanaa Dhoofinta Dhuxusha Somalia ee ay Alsabaab ka helaan macaashka, Ku-takri-falka ama si xun u isticmaalka Hantida Dadka Soomaaliyeed iyo falalka colaadeed ee ka dhanka ah dadka rayidka ee gudaha Somalia, kuwaasi oo dhamaantooda ka hor imaanaya Xaalladda Amamanka iyo xal-u-helista colaadaha ka socda gudaha Somalia.
Madaxweynaha Maraykanka waxa uu gebagebadda Ogeysiintiisa ku xusay im xaalladda Somalia weli tahay mid aan caadi ahayn iyo cabsi aan la filaynin oo ku wajahan Amniga Qaranka iyo Siyaasadda Dibedda ee dalka Maraykanka,
Sababtan awgeedna waxaa markii ugu horreysay Xaalladda Degdegga Qaranka lagu dhawaaqay bishii April 12-dii ee sannadkii 2010-kii
“Sidaas darteeda, waxaan Aniga ku sii wadaa inaan ku kordhiyo muddo hal sanno ah Xaalladda Degdegga ee lagu dhawaaqay Amarkii Fulinta ee tirsigiisu ahaa 13536” ayuu Donald Trump ku sheegay Ogeysiintiisa oo lagu soo daabici doono Diiwaanka Federalka, ka hor inta aan loo gudbinin Aqalka Kongareeska ee Maraykanka.
← The Farmajo Trajectory: Looking back at after two years
59-guuradii Aasaaska Xoogga Dalka oo maanta la xusayo( Dib u milicso sooyaalka CXD) →
Mareykanka oo ka hadlay siyaasadda dowladda Federalka ee amniga iyo xiriirka gudaha
Deg Deg: Ciidamada dowladda oo gacanta ku dhigay Shabaab saakay dil fuliyay
Ciidamada Kenya oo kabaxay Saldhigii Saddexaad markii uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeya Somalia